Ny zava-drehetra ho fantatra momba ny fizarana ny efijery ary hikorisa amin'ny iOS 11 | Vaovao IPhone
Ny zava-drehetra ho fantatra momba ny fizarana ny efijery ary hivezivezy ao amin'ny iOS 11
Alvaro Fuentes | | maro
Miaraka amin'ny fahatongavan'i iOS 11 isika dia afaka mankafy kinova vaovao misy endri-javatra roa amin'ny rafitra fiasan'ny Apple ho an'ny telefaona finday: ny fomba fijery zaraina ary solafaka. Ankehitriny, samy nohavaozina indray ary mahery vaika kokoa, nefa koa sarotra kokoa. Hatramin'ny nampidirana azy ireo tao amin'ny iOS 9, dia noforonina ho fomba mety hijerena fampiharana roa mitovy izy ireo amin'ny fotoana iray.
Tonga izy ireo izao lafin-javatra tena ilaina, mamela antsika hisintona sary, antontan-taratasy, lahatsoratra ary URL eo anelanelan'ny rindranasa samihafa, ary koa ny miasa miaraka amin'ireo rindranasa hatramin'ny telo amin'ny efijery iray miaraka.
1 Slide Over vs. Fizarana efijery
2 Fihetsika tsy mitovy
3 Manampia fampiharana fahatelo
Slide Over vs. Fizarana efijery
Ny fizarana lamba amin'ny ankapobeny dia misy manana fampiharana roa (na fikandrana Safari roa) mizara ny efijery mitovy, amin'ny faritra mitovy, miaraka amin'ny tsipika fizarazarana izay azo afindra hisafidy fizarana dimam-polo isan-jato na ampahany fitopolo sy telopolo isan-jato. Tsy toy ny zava-mitranga ao amin'ny iOS 9 sy iOS 10, ity fampiasa ao amin'ny iOS 11 ity dia mamela ny fizarana fitopolo sy telopolo hatao eo amin'ny lafiny roa amin'ny efijery. Hatramin'izao, ny ampahany madinidinika dia tsy hita eo amin'ny ilany ankavanana.
Etsy ankilany, ny Slide Over dia misy apetraho eo ambonin'ny ambin'ny fampiharana misokatra ny varavarankelin'ny rindranasa. Akaiky kokoa ny mihazakazaka Mac izy io satria afaka mitantana bebe kokoa toy ny varavarankely izy ary manarona ny zava-drehetra ao aoriany, fa azonao atao aza ny manetsika ny varavarankely hahatonga azy hanjavona amin'ny efijery. Ity endri-javatra ity dia natao kokoa amin'ny fangatahana zavatra haingana amin'ny fampiharana misokatra iray rehefa miara-miasa amin'ny iray hafa. Ohatra, eo am-pamaliana hafatra iray dia afaka misintona antontan-taratasy ao anaty rindrambaiko isika. Ny Slide Over dia mety ho lasa ny fizarana fizarana raha ilaina.
Fihetsika tsy mitovy
Arakaraka ny toerana itarihanao ny fampiharana faharoa dia hahazo valiny hafa ianao. Raha misintona rindrambaiko ianao ary misintona azy mankany amin'ny iray hafa, miditra mivantana amin'ny lahasa Silde Over izahay. Raha hanova izany ho efijery zaraina, mila tsindrio fotsiny ny kiheba ambony eo an-tampon'ny tontonana.
Ao amin'ny kinova Beta amin'izao fotoana izao, ny tontonana Slide Over miseho eo ankavanana hatrany avy amin'ny efijery, na dia tarihinao sy alatsakao ny rindrambaiko amin'ny ilany havia. Ary koa, tsy azonao atao ny mamafa ny fampiharana avy eo ankavanan'ny efijery hanilihana azy. Tsy afaka manao izany ianao raha misokatra amin'ny ankavanana ilay fampiharana (ary indraindray miverina miverina avy eo amin'ny ilany ankavanana hamerina izany fampiharana izany, toy ny amin'ny iOS iOS 9 sy 10).
Raha hametraka ny fampiharana faharoa mivantana amin'ny maodely fizarana fizarana dia tsy maintsy sintomina mankany amin'ny zoro havia na havanana izy hatramin'ny farany. Hihena kely ny varavarankely lehibe ary hiseho eo amin'ny sisin'ny efijery ny bara mainty. Tokony hanao izany isika avy eo alatsaho eo amboniny ilay app hanokatra azy amin'ny fomba fisarahana efijery. Tsy toy ny mitranga amin'ny Slide Over, ity miasa amin'ny lafiny rehetra, samy manana ny fampiharana eo ankavanana sy ny iray amin'ny ankavia.
Manampia fampiharana fahatelo
Raha manana ny iray amin'ireo iPad Pro vaovao isika dia azo ampidirina ao anaty mix ihany koa ny fikandrana fahatelo. Angamba isika mitoraka bilaogy amin'ny takelaka iray ary mamaky fanovozan-kevitra isan-karazany ao amin'ny Safari amin'ny iray hafa… ary te hanampy sary izahay. Amin'ity tranga ity, ohatra, dia apetratsika ao anaty efijery fizarana i Ulysses sy Safari Hisintona ny sary ho any ambony izahay. Eto isika dia tsy maintsy mitandrina fa ny fampiharana sary dia tsy "milatsaka" amin'ireo takelaka roa misokatra hafa, satria amin'ity tranga ity dia hosolointsika ity fampiharana misokatra ity amin'ity fampiharana fahatelo ity.
Toa farany nanery an'i Apple hanasongadinana ireo endri-javatra roa ireo izay tena ilaina amin'ny mpampiasa i Apple. Manantena izy ireo fa handroso hatrany ary hanadio bebe kokoa azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny zava-drehetra ho fantatra momba ny fizarana ny efijery ary hivezivezy ao amin'ny iOS 11
Apple mandefa Beta 3 an'ny iOS 11, tvOS 11 ary macOS High Sierra
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Facebook amin'ny iPhone